Etiquette | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Etiquette
Posted by nigimi77 on May 28, 2011 in Creative Writing, Society & Lifestyle, Think Tank |9comments
” ဟယ်လို….အေး…ဟဲ့…ငါတို့ရုပ်ရှင်လာကြည့်နေတာ…နင်ဘယ်ရောက်နေလဲ…..အေး….အေး…ဟုတ်တယ် ငါလဲပြောပါတယ်…..အေးလေ…သူ့ သဘောနဲ့ သူဆိုတော့လဲ
ငါတို့ က ဘာပြောလို့ ရမှာလဲ…ဟား..ဟားးးးးးးးးး………”
နေကြာစေ့ ခွာသည့် အသံ ၊ ပေါက်ပေါက်ဆုပ် စားသည့် အသံ ၊ အတွဲများ တပြွတ်ပြွတ် နှင့် မုန်ယို နေသည့် အသံများ ကြားမှ အဆိုပါ အမျိုးသမီး၏ လွန်စွာ အောက်ကလိအာ
ဆန်သော စူးရှပြစ်ချွဲသည့် အသံသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်နေသည်။ တခြား အသံများအားတတ်နိုင်သမျှ သီးခံခဲ့သော်လည်း မိမိ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကြောင်းအရာများကို
အများသူငါ အပန်းဖြေသော ရုပ်ရှင်ရုံထဲတွင် ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ ကျယ်လောင်စွာ တယ်လီဖုန်း ပြောနေသော အမျိုးသမီးအား သမင်လည်ပြန် လှည့်ပြီး အမူအရာနှင့် ကြိမ်ဖန်များ
စွာ သတိပေးသော်လည်း အထူအပါး လုံးဝ နားမလည်သော ထို မာတုဂါမသည် သာလွန်ပြီး ဆိုးလာတော့သည်။ တဟီးဟီး တဟားဟား နှင့် ဖင်တွင် သေးစိမ့်မတတ် ဟီလာတိုက်
နေလေတော့သည်။ နောက်ဆုံးမတော့ သကောင့်သား နိဂိမိ ယောကျာင်္းတို့ထုံး နှလုံးမူပြီး……” ဒီမှာ အမျိုးသမီး…နဲနဲ အားနာပါဗျ…ခင်ဗျားရောက်နေတာ အများသူငါ
အပန်းဖြေတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံ… ဒီလို အကျယ်ကြီး Phone ပြောနေတာ ရုပ်ရှင် ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့ မရတော့ဘူး….” ဟု ပြောလိုက်သည့် သကာလ………..
” ဟဲ့ အကောင် ရုပ်ရှင် ကောင်းကောင်းကြည့်ချင်ရင် အိမ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ရုံထားပြီးကြည့် …ငါ့ ဘာသာ Phone ပြောတာ နင့် အပူဘာပါလဲ…ဆောက်ရုပ်ကိုက လုံးဂတီး ရုပ်နဲ့ …
လာပြီး အာဝါဒါး လာလုပ်နေတယ်…”
မိတ်ဆွေ …သင်ကော ရုပ်ရှင် ကြည့်သော အခါ ဘယ်လို အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ကြည့်ရှုပါသလဲ… Etiquette ဆိုတာကို သိပါသလား….မသိလျင် ဆက်ဖတ်ပါ။
မြန်မာပြည်တွင် အသုံးပြုသော Phone များအား အကုန်အစင် မလေ့လာဖူး လို့မသိသော်လည်း ……Phone တွင် Etiquette Mode ဆိုသည်မှာ ပါရှိပါတယ်။
ဒီက Phone တွေမှာတော့ များသောအားဖြင့် Vibration Mode ပါရှိပါတယ်။ အဲဒါဟာ မိတ်ဆွေက Phone ခေါ်သံမကြားမှာစိုးလို့တုန်ခါမှုနဲ့အသိပေးရုံ သက်သက် အတွက်
မဟုတ်ပါဘူး။ Etiquette ကို အဓိပါယ် ဖွင့်ကြည့်ရင် ” လူမှု ကျင့်ဝတ် ၊ လူမှု အဆင့်အတန်း ” စသဖြင့် ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၁။ လူအများကြားမှာ မိမိဆီကို ဖုံးလာတဲ့ အခါ ဘယ်သူက ဆက်ပါတယ် ဆိုတာ နံပါတ်ကို မြင်နေပါရဲ့ သားနဲ့Phone ကို လူမြင်အောင်ထောင်ပြီး မိမိကို အာရုံစိုက်လာတဲ့
အချိန်ထိ ဘေးဘီကို အကဲခတ်ပြီးမှ Phone ကိုင်တတ် တဲ့လူစားမျိုးလား။
၂။ လိုင်းကလဲကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်နေရဲ့ သားနဲ့၊ တဖက်မှပြောနေတဲ့ အသံကို ဘေးက လူတောင် ကြားနေရသားနဲ့ ၊ မိမိ ကိုယ်တိုင်ကလဲ နားမလေး ပါပဲနဲ့မလိုအပ်ပဲ အသံကို
မြှင့်ပြီး အော်ပြောတတ်တဲ့ လူစားမျိုးလား။
၃။ အရာ တခုခုကို ညွန်ပြရင် သံလျက် ကိုင်ဆောင်ထားသလို Phone ကိုင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဟိုထိုးဒီထိုး ထိုးပြတတ်တဲ့ လူစားမျိုးလား။
၄။ ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့Phone လာလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပဲ Phone ပြောရင်းနဲ့ဈေးဝယ် တတ်တဲ့ လူစားမျိုးလား။
ဘယ်လို လူစားမျိုးထဲမှာ မိမိ ပါဝင်နေ သလဲဆိုတာ သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
အပမ်းမကြီးပဲ ပြုပြင်အားထုတ်နိုင်သည့် Etiquette ယဉ်ကျေးမှုအား လက်ခံနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးသားပါတယ်။
ရွာသားတွေ တွေ့ ဆုံပွဲ မလုပ်ခင် ဒါကို အရင် ဖတ်ကြည့်။
၁. ကျွန်တော်ကလေ ဖုန်းကိုသူများမြင်မှာ အရမ်းကြောက်ပါတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖုန်းနံပါတ်တောင်းမယ် ပြီးရင် ငြင်းလို့မကောင်းတဲ့ အကူအညီတွေကို (တစ်ဖက်သား အဆင်ပြေ
မပြေ မသိ) တောင်းမှာစိုးတဲ့အတွက်
၂. ဖုန်းလာရင်လည်း လန့်ပါ၏
ကိုယ်ပိုင်လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနားယူချိန်မှာ အလုပ်က အရေးတကြီးဆက်မှာစိုးသောကြောင့်
တစ်ခုတော့မျှော်လင့်မိတယ် ချစ်သူဆီက ဖုန်းပေါ့
ကျုပ်က နိုင်ငံခြားမှာနေလို့သာ ဖုန်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
( ရွာမှာတော့ နို့ဆီခွက်နှစ်လုံးကို အပ်ချီကြိုးနဲ့သွယ်ပြီး စကားပြောကြည့် တော်တော်ဝေးတာတောင်
ကြားရတယ်နော် ( စကားချပ် ) )
ဖုန်းဝယ်မဲ့အစား နမ သုံးလေးကောင်ဘဲဝယ်တော့မယ်
ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားတို့လို သူဌေးတွေ လုပ်ငန်း၇ှင်တွေက
အကြောင်းကြောင်းကြေင့် ဖုန်းကိုင်တာကတော့ ခင်ဗျားတို့အပိုင်းပါ
ပြဿနာက ခင်ဗျားတို့ အပိုင်းက ကျုပ်တို့အပိုင်းရောက်လာတာက
ဥပမာ လိုင်းကားထဲမှာ ဆိုရင် တစ်ခါတစ်လေ တော်တော် သောက်မြင်ကပ်တယ် အဟုတ်
ring tone ကို အကျယ်ကြီးလုပ်ထားတယ်
ရုပ်တရက်ကြီးဖုန်းက ထအော်တဲ့အခါ လန့်တောင်သွားတယ် ( သတိမရှိတာကို ကြွားတယ်လို့မှတ် )
သူ့ဘာသာ ဘာကိုဒေါခွီးတာလား ဘာကို ဖီးလ်းလာတာလား မပြောတတ်ဘူး
အသံဗြဲဂျီးနဲ့ အာပုတ်စော်ကလည်း နံသေးတယ်
( တစ်ခါတစ်လေဆို ငတိမ ချောချော လေးတွေ တိုးတိုးလေး ပွားနေတာကိုတော့
ဘာများပါလိမ့်ပေါ့ အတင်း အာရုံလိုက်စိုက်ရတာကလည်းတစ်မှောင့် ( ဤကား ဒုတိယ စကားချပ် ) )
တစ်ခါ ဂျပန်မှာ အိုးတိုက် ပန်းကန်ဆေး သွားလုပ်ဘူးတဲ့
ကိုလင်းဝေကျော် ဆီဆိုင်မှာ ဝင်ယားသလိုမျိုးဟာလည်း
ကျုပ်တို့ မွန်တိုင်းရင်းသားတွေမှာ စကားတစ်ခုရှိလေရဲ့
တဲ့ဗျ သူ့နေရာနဲ့သူလို့ အဓိပ္ပါယ်ရလေရဲ့
ဒါကြောင့် ခင်ဗျား ဝင်ယားတာကို ကျုပ်က လက္ခံတယ်
တစ်ခုသော အခန်းကိုရောက်ရင် အောက်ကတစ်ယောက်က
တစ်ခုခုကို လိုက်အော်တာလည်း ကြားဘူးမှာပေါ့နော
ကိုရင်ဘု။ ခင်ဗျားက အရင်ကထက်ပိုပြီး မြင့်လာသလို နုလာတဲ့ အပိုင်းတွေ တွေ့ ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ပေါ့ …အရင်က ပါးလှပ်နေတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ဗိုက်က မန်းလေး ဂေဇတ် ဆိုတာကို စသိတဲ့
အချိန်က စပြီး ပိုထွက်လာတယ်။
ကောင်မယေ တွေရှိတယ် ဖုန်းကို အိတ်ထဲ လဲမထည့် (အိတ်ထဲထည့်ရင်မကြားရလိုဆိုပဲ ) လက်က နေပဲ ကိုင်ကိုင်ထားကျတာ အားတဲ့ လက်တဖက်က ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုင်ထား ရတာကို နက်နဖက်လုံးကို မအား ကျပါဘူး (ဈေးဝယ်ထွက်ရင် အထုတ်တွေလက်မနိုင်မနင်ဖြစ်နေလို့ ) သူတိုအစား သယ်ပေးလိုက်ချင်တယ် တချို ကောင်မယေ တွေကိုပြောတာနော် အပျို(အကိတ်)ကြီးတွေမပါဘူး
သူတို့ သွားတိုင်ရမှာပါ..။ သူတို့က… ဆွဲထုတ်မှာပေါ့..။
ဆိုတော့.. စားသောက်ဆိုင်…. ဆိုလည်း.. စားသောက်ဆိုင်က တာဝန်ရှိပါတယ်..။
ပါ့ဗလစ်နေရာတွေဆိုရင်တော့… ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး.. ပါ့ဗလစ်တင်ပေးလိုက်ပေါ့..။
ခေါင်းစဉ်ကို ..”ကျယ်လွန်းသူတယောက်အကြောင်း”… လို့ပေးပါ…။
အောက်မှာ.. သတင်းကရထားပေါ်မှာ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ဖုံးပြောတဲ့အတွက်… ရဲက…နှင်ချခံရသူတယောက်အကြောင်း..။
By Emily Sinovic KATU News and KATU.com Staff Published: May 16, 2011 at 4:54 PM PDT Last Updated: May 16, 2011 at 7:49 PM PDT
ဟိုတနေ့က အန်တီဆူး ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင်း လူတယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလားပဲ။ သူပြန်ပြောတာ ကတုံးနဲ့ရန်ဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး ဆံပင်မရှိတဲ့လူနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့။ မိတ်ဆုံပွဲဖြစ်လို့ သွားမယ်ဆိုရင် ဆံပင်တုလေးတပ်ပြီး ရုပ်ဖျက်သွားဖို့ စေတနာနဲ့ အကြံပြုပါတယ်။ သွေးသံရဲရဲ သတင်းတွေ မကြားချင်လို့ပါ…သတ္တဝါတွေအားလုံး ဘေးရန်ကင်းပါစေ။
ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက် ပြုမူချက်တွေပြောင်းရမယ်ထင်ပါတယ်…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဆိုရင်ရော ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုန်းသူများ ဆူဆူညံညံ လုပ်တာကြိုက်လား ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့
ကိုယ်ချင်းစားတရားလေး ထားရင် အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်ထင်တယ်…
ကိုယ့်ရှိလို.ကိုယ်လုပ်တာဘာဖြစ်လဲ ဆိုတဲ့လူတွေကို သွားပြောလို.ကတော့ အခုလိုပဲအပြောခံရမှာပါပဲ… သီးခံလိုက်ပါ.. သူမောရင်ရပ်သွားပါလိမ့်မယ်…
ကိုယ့်ဆရာ ရေ ။ ကိုယ့် ဆရာ က ရုပ်ရှင်ရုံ ထဲ မှာ မို့ နဲနဲ တော်သေးတယ် ။ ဘုရားပုရဝဏ် ထဲ မှာတောင် ဆင်ခြင်ရမှန်း မသိတဲ့ အမျိုးသမီး တွေ ကို အမြဲ တွေ့ နေ ရတယ် ဗျာ ။ အခုဆို ဘုရားပရဝဏ် အတွင်းမှာ ” ဖုန်းပိတ်ထားခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူကြပါရန် ” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေး တောင် တွေ့ နေရပြီ ။ ဖုန်းသံ ring tone ကို အဆုံးတင် ပြီး ဖုန်းလာရင် တော်တော် နဲ့ မကိုင် တာ အမျိုးသမီး တွေ ပဲ ဗျ ။ အသက်ကြီးငယ် မရွေး ။ ယောက်ျားတွေ က သိပ်မလုပ်ဘူး ။ ဘာသဘော နဲ့ လည်း ဆိုတာတော့ သိကြတဲ့သူတွေ ဆက်ရေးပြပေးမယ်လို့ စောင့်ဖတ်နေမယ် ဗျာ ။